ဘလော့ဂ်များနှင့်ပန်းများ - မျိုးစေ့၊ ပေါင်းပင်၊ ၀ တ်မှုန်ကူးခြင်းနှင့်ကြီးထွားခြင်း Martech Zone
ဘလော့ဂ်များနှင့်ပန်းများ - မျိုးစေ့၊ ပေါင်းပင်၊ ၀ တ်မှုန်ကူးခြင်းနှင့်ကြီးထွားခြင်း
ကြာသပတေးနေ့, သြဂုတ်လ 31, 2006 သောကြာနေ့, စက်တင်ဘာလ 1, 2006 Douglas Karr
အလုပ်မှာအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ကသူဖတ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော့်ကိုပြောခဲ့တာကအခြေခံအားဖြင့်အတွေးအခေါ်အလွန်နည်းပါးတယ်ဆိုတဲ့အထောက်အထားဖြစ်တယ်။ ပြီးခဲ့သည့်ညကငါရေးသည့်စာကိုရေးခဲ့၏ ငါ Indy ကိုရွေးချယ်ပါ။ ရှေးရှေးလူတွေကိုအသိပေးခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏အစီအစဉ်အတွက်ဘာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြရန်။ ပရိသတ်ကနည်းပညာသိပ်မရှိတဲ့အတွက်ငါကသတင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်တဲ့ဥပစာစကားထဲထည့်ချင်တယ်။ အင်ဒီယားနားကိုစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလို့လူသိများတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရွေးခဲ့တယ် မျိုးစေ့၊ ပေါင်းပင်၊ ၀ တ်မှုန်ကူးခြင်းနှင့်ကြီးထွားခြင်း.
အခြားကွန်ရက်ရှိဝက်ဘ် 2.0 နေရာကိုကြည့်နေစဉ်ကျွန်ုပ်အကြံအစည်ပေါ်လာသည်။ ဘယ်အလုပ်အမှုဆောင်ကပြောလဲဆိုတာကိုမမှတ်မိတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူကပိုက်ကွန်ပေါ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်တွေဆောက်ဖို့အတွက် 'မျိုးစေ့နဲ့ပေါင်းပင်' တွေကိုသူပြောခဲ့တယ်။ ငါဘယ်လိုကြီးထွားလာမလဲဆိုတာကိုပြောဖို့နောက်ထပ်အဆင့်တစ်ခုကိုလုပ်ခဲ့တယ် ငါ Indy ကိုရွေးချယ်ပါ။
Blogs & Blossoms - ဥယျာဉ်မှူးများသည်ဤနည်းစနစ်များကိုနှစ်ပေါင်းရာချီအသုံးပြုခဲ့သည်။ ငါတို့ကအသစ်စက်စက်မျိုးရိုးဖြစ်သည်။
မင်းငါ့စာဖတ်နိုင်တယ် entry ကို ထို site ပေါ်တွင်ကျော်ပြီးသော်လည်း၊ ၎င်းသည်မည်သည့်ဘလော့ဂ်နှင့်မဆိုသက်ဆိုင်သည်။
မျိုးစေ့ - သင်၏စာဖတ်သူများအားအသုံးဝင်သောအကြောင်းအရာများကိုပေးရပါမည်။ ဤအချက်က၎င်းတို့အားသူတို့ပြန်လာရန်အစေ့များနှင့်စာဖတ်သူအသစ်များကသင့်ကိုရှာတွေ့စေသည်။
ပေါင်းပင်: သင်၏အသံနှင့်ဒီဇိုင်းကိုကောင်းစွာညှိရမည်။ ဟာသနှင့်ပတ်သက်သည့်တစ်နေရာတည်းသောပို့စ်များ၊ Colbert ဗီဒီယိုသို့မဟုတ်သင့်မိသားစုအားလပ်ရက်အပြင်ဘက်တွင်သင့်စာဖတ်သူများအားသင့်ထံမှသူတို့မျှော်လင့်ထားသည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုပေးရန်လိုအပ်သည်။
တ်မှုန်ကူး သင်၏အသံသည်သင်၏ဘလော့ဂ်ထက် ကျော်လွန်၍ သယ်ဆောင်ရမည်။ ဘလော့ဂါများသည်သူတို့၏စက်မှုလုပ်ငန်း၊ အခြားဘလော့ဂ်များ၊ သတင်းများအပေါ်သူတို့၏မျက်လုံးကိုစောင့်ကြည့်ပြီး၎င်းတို့အပေါ်ပြုမူသည်။ မှတ်ချက်များထည့်ခြင်းနှင့် trackbacks သုံးခြင်းဖြင့်အခြားတင်ပို့ချက်များအပေါ်သင်၏ထင်မြင်ချက်များကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းသည်သင်၏မျိုးစေ့နှင့်ဝက်ဘ်ကိုညစ်ညမ်းစေသည်။ သင်၏အစေ့ကိုကြဲခြင်းအကြောင်းအရာကား၊ Blogging သည်ဆက်သွယ်ရေး = နှစ်လမ်းဖြစ်သည်။
ကြီးပွားသည် သင်ဆက်လက်မျိုးစေ့၊ ပေါင်းပင်နှင့် ၀ တ်မှုန်ကူးသည့်အခါသင်၏သီးနှံ (စာဖတ်ပရိသတ်) ကြီးထွားလာလိမ့်မည်။ ကြီးထွားမှုသည်သင်၏တာ ၀ န်၏အစိတ်အပိုင်းလည်းဖြစ်သည်။ သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုတိုးမြှင့်ပြီးသင်၏ကွန်ယက်ကိုတိုးတက်စေပါ။ သင်၏ကောင်းမွန်သောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ သင်၏ဘလော့ဂ်များတိုးတက်မှုကိုမျက်ခြည်မပြတ်စေရန်သင်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်သို့ ဦး တည်နေကြောင်းသေချာစေပါ။
အဲဒီမှာသင်ရှိသည်! ဘလော့ဂ်များနှင့်ပန်းပွင့်များ။ ဥယျာဉ်မှူးများနှစ်ပေါင်းရာချီအသုံးပြုခဲ့သည့်နည်းလမ်းများသည်သင်အောင်မြင်သောဘလော့ဂ်တည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည့်နည်းလမ်းများနှင့်မတူပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရိုးရှင်းစွာဥယျာဉ်မှူးများ၏မျိုးစိတ်သစ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မြေသြဇာသည်စာဖတ်သူဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏မြေသြဇာသည်သတင်းအချက်အလက်ဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏မျိုးစေ့များသည်စာမူများဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လယ်ယာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပေါင်းပင်များသည်ယှဉ်ပြိုင်မှု၊ အာရုံစူးစိုက်မှုမကောင်းသောဒီဇိုင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ တ်မှုန်ကူးခြင်းနည်းစနစ်များမှာမှတ်ချက်များ၊
Starbucks ကူပွန်လိမ်လည်မှု: ဘာကြောင့်ဘားကုဒ်မလုပ်တာလဲ။
The Long Tail: gapingvoid.com မှရယ်စရာကာတွန်း